Ny hafatra dimy amin'ny Medjugorje - Fanapahan-kevitra ho an'ny Fanjakana
Ny hafatra dimy an'ny Medjugorje
Ny hafatr'i Medjugorje dia antso ho amin'ny Fiovam-po, fiovam-po miverina amin'Andriamanitra. Manome vato na fitaovam-piadiana dimy ny Lady Lady antsika, izay azontsika ampiasaina handresena ny hery sy ny fitaoman'ny ratsy sy ny ota amin'ny fiainantsika. Ity ny "Hafatry ny Medjugorje." Ny tanjon'ilay ramatoa mba ho tonga eto an-tany dia ny hitarika antsika tsirairay hiverina any amin'i Jesosy Zanany. Manao izany amin'ny alàlan'ny fitarihantsika antsika, tsikelikely, mankany amin'ny fiainana masina amin'ny alàlan'ny hafatra an-jatony nomeny an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fahitana ao Medjugorje. MANDRAY ny fotoana handraisana fanapahan-kevitra. Ny antso an-tsinay dia URGENT. Tokony hanokatra ny fontsika isika ary hanomboka hanova ny fiainantsika manomboka anio, manomboka dieny izao.
Miova haingana ny fotoana. Tamin'ny 18 martsa 2020, nampahafantatra ny fahitana, Mirjana i Our Lady, nandritra ny fahitana fa tsy hiseho aminy intsony izy amin'ny faha-2 isaky ny volana. Nilaza ny Tompontsika taloha fa hisy ny fotoana hitiavan'ny maro ny fotoanan'ny hafatra ary hitomany fa tsy niaina izany isika.
Mba hamakiana ireo hafatra maro ary hahafantaranao bebe kokoa momba ny fisehosehoana Medjugorje, kitiho eto. Jereo ihany koa ireo boky lafo indrindra amin'ny Medjugorje: NY LALANA ARY MARO: Ny fomba enina lahy no nahazo ny ady lehibe indrindra tamin'ny fiainany ary FARANY amin'ny tantaram-panahy: Tantara mahagaga momba ny fanasitranana sy fiovam-po amin'ny alalàn'i Maria.
Ny vavaka no ivon'ny drafitry ny Our Lady ary hafatra matetika indrindra ao Medjugorje.
Androany aho dia miantso anao hivavaka. Fantatrao, ry zanaka malala, fa manome fahasoavana manokana Andriamanitra amin'ny vavaka… Miantso anareo aho, ry zanako, hivavaka amin'ny fo. (April 25, 1987)
Ny mivavaka amin'ny fo dia ny mivavaka amin'ny fitiavana, fahatokisana, fandavana ary fifantohana. Manasitrana fanahy olombelona ny vavaka Manasitrana ny tantaran'ny ota. Raha tsy mivavaka isika dia tsy afaka manana traikefa an Andriamanitra.
Raha tsy mivavaka tsy mitsahatra ianao dia tsy afaka hahatsapa ny hatsarana sy ny halehiben'ny fahasoavana izay atolotry anao Andriamanitra. (Febroary 25, 1989)
Vavaka natolotry ny Our Lady:
Tany am-boalohany, taorian'ny fomban-drazana Kroasia taloha, ny Our Lady dia nangataka ny hivavaka isan'andro isan'andro: ny The Creed, narahin'ny Fito hoe Rainay, Hail Mary's, ary Glory Be's.
Taty aoriana dia nanoro hevitra ny hivavaka amin'ny Rosary ny Our Lady. Voalohany, nangataka anay hivavaka 5 taona avy eo ny Our Lady, 10.
Tokony hivavaka daholo ny olona rehetra. Hoy ny Our Lady: "Enga anie ny fanjakana hanjaka manerana izao tontolo izao." (25 aogositra 1989) Amin'ny alàlan'ny vavaka, handresy ny herin'i Satana isika ary hahazo fiadanana sy famonjena ho an'ny fanahintsika.
Fantatrao fa tiako ianao ary tonga avy am-pitiavana aho, koa afaka maneho aminao ny lalan'ny fandriampahalemana sy famonjena ho an'ny fanahinao aho fa te hihaino ahy ianao ary tsy hamela an'i Satana hampiala anao. Ry zanaka, tena matanjaka Satana! Noho izany, miangavy anao aho mba hanokana ny vavakinao mba ho voavonjy ireo izay eo ambany fitarihany. Mijoroa ho vavolombelona amin'ny fiainanao, atoy ny ainao hatao famonjena ho an'izao tontolo izao ... koa aza matahotra. Raha mivavaka ianao dia tsy mety handratra anao i Satana, na dia kely aza, satria zanak'Andriamanitra ianao ary miambina anao izy. Mivavaha, ary avelao ho eo an-tananao mandrakariva ny Rosary ho mariky ny satana fa ahy ianao. (Febroary 25, 1989)
Ny herin'i Satana dia rava amin'ny alalan'ny vavaka ary tsy afaka manisy ratsy antsika Izy raha mivavaka. Tsy tokony hisy olona matahotra ny ho avy raha tsy mivavaka izy. Raha tsy mivavaka izy dia izy ve tena tian'i Chris? Raha tsy mivavaka isika dia jamba isika amin'ny zavatra maro ary tsy afaka milaza ny tsara amin'ny ratsy isika. Very ny foibentsika sy ny fifandanjana isika.
Ao amin'ny Testamenta Taloha sy ao amin'ny Testamenta Vaovao, misy ohatra maro amin'ny fifadian-kanina. Nifady hanina matetika Jesosy. Araka ny Tradition, ny fifadian-kanina dia famporisihana indrindra indrindra amin'ny fotoan'ny fakam-panahy lehibe. Ny devoly sasany, "azo esorina amin'ny fomba hafa afa-tsy amin'ny vavaka sy fifadian-kanina", hoy i Jesosy. (Marka 9:29)
Ilaina ny fifadian-kanina mba hahatrarana ny fahalalahana ara-panahy. Amin'ny alalan'ny fifadian-kanina, afaka mihaino tsara an'Andriamanitra sy ny hafa isika ary mahita azy ireo mazava kokoa. Raha, amin'ny alàlan'ny fifadian-kanina, hahatratrarana izany fahalalahana izany isika dia ho mahafantatra bebe kokoa ny zavatra maro. Rehefa mifady hanina izahay dia maro ny tahotra sy tebiteby manala. Misokatra kokoa amin'ny fianakaviantsika sy amin'ireo olona izay iarahantsika sy miasa isika. Nangataka anay ny fifadian-kanina indroa isan-kerinandro ny Our Lady:
Hainganana haingana ny alarobia sy ny zoma. (Aogositra 14, 1984)
Nangataka anay izy hanaiky io hafatra sarotra io ”.… Miaraka amin'ny sitrapo hentitra.”Hoy ​​izy nanontany anay:Mahareta amin'ny ... fifadian-kanina.”(25 Jona 1982)
Ny fifadian-kanina tsara indrindra dia eo amin'ny mofo sy ny rano. Amin'ny alàlan'ny fifadian-kanina sy ny vavaka dia afaka mampiato ny ady ny olona iray, afaka mampiato ny lalànan'ny natiora. Ny asan'ny fiantrana dia tsy mahasolo ny fifadian-kanina ... Ny olon-drehetra afa-tsy ny marary kosa tsy maintsy mifady hanina. (Jolay 21, 1982)
Mila mahatsapa ny herin'ny fifadian-kanina isika. Ny fifadian-kanina dia midika hoe manao sorona ho an'Andriamanitra, tsy hanolotra ny vavaka ataontsika fotsiny fa mba hahatonga antsika rehetra handray anjara amin'ny fanaovana sorona. Tokony hifady am-pitiavana, sy finiavana manokana ary hanadio ny tenantsika sy izao tontolo izao isika. Tokony hifady hanina isika satria tia an’Andriamanitra ary maniry ny ho miaramila izay manolotra ny vatantsika amin'ny ady hanoherana ny ratsy.
Matetika, ny sakaizanay dia tonga amin'ireo mpijery faly sy faly. Indray andro, raha niresaka momba ny Baiboly dia nitomany izy. Hoy ny Reninay: “Hadinonao ny Baiboly."
Ny Baiboly dia boky hafa noho ny hafa eto ambonin'ny tany. Vatican II dia nilaza fa ny boky kanonika rehetra ao amin'ny Baiboly dia, "... voasoratra ao ambanin'ny tsindrimandrin'ny Fanahy Masina, manana an'Andriamanitra ho mpanoratra izy ireo." (Lalàm-panorenana momba ny dogmatika momba ny fanambarana momba ny Devoly) dia midika fa tsy misy boky hafa azo oharina amin'ity boky ity. Izany no antony nangatahan'i Our Lady antsika hanasaraka ny BOKOKA amin'ireo boky olombelona amin'ny talantalana. Tsy misy soratra, na avy amin'ny olo-masina na mpanoratra aingam-panahy, azo ampitahaina amin'ny Baiboly izany. Izany no antony angatahina hametraka ny Baiboly amin'ny toerana hita maso ao an-tranontsika.
Ry zanaka malala, miantso anao aho anio hamaky ny Baiboly isan'andro ao an-tokantranonao ary avelao ho eo amin'ny toerana hita maso izany, mba hamporisika anao hatrany hamaky azy sy hivavaka. (Oktobra 18, 1984)
Tsy fahita firy ny maheno ny Our Lady milaza hoe, "tsy maintsy ianao". "Faniriany", "antso," sns, izy kosa, indray mandeha, dia nampiasa kroaty tena matanjaka izay midika hoe "tsy maintsy."
Ny fianakaviana tsirairay dia tsy maintsy mivavaka amin'ny mpianakavy ary mamaky Baiboly. (Febroary 14, 1985)
Ny Vavavavinay dia mangataka fieken-keloka isam-bolana. Hatramin'ny andro voalohany tamin'ny fisehoan-javatra dia niresaka momba ny fiaiken-keloka ny Our Lady:
Mihavàna amin'Andriamanitra sy eo aminareo. Amin'izay, mila mino, mivavaka, mifady hanina ary mandeha amin'ny fiaiken-keloka. (June 26, 1981)
Mivavaha, mivavaha! Ilaina ny mino matanjaka, mandeha any amin'ny fiaiken-keloka tsy tapaka, ary toy izany koa, handraisana ny Komoniona Masina. Izany no hany famonjena. (Febroary 10, 1982)
Na iza na iza nanao ratsy be nandritra ny androm-piainany dia afaka mandeha any an-danitra raha miaiky izy, dia miala tsiny noho ny zavatra nataony, ary nandray komity tamin'ny fiafaran'ny fiainany. (Jolay 24, 1982)
Ny Fiangonana Tandrefana (Etazonia) dia nanilika ny fiaiken-keloka sy ny maha-zava-dehibe azy. Hoy ny Our Lady:
Ny fiaiken-keloka isam-bolana dia fanafody ho an'ny Fiangonana any andrefana. Ny iray dia tokony hampita izany hafatra any Andrefana izany. (Aogositra 6, 1982)
Ireo mpiangona izay tonga any Medjugorje dia mampiaiky volana ny isan'ny olona miandry Fieken-keloka sy ny isan'ny mpisorona mihaino ny fiaiken-keloka. Mpisorona marobe no nanana traikefa fanao mahazatra nandritra ny fiaiken-keloka tao Medjugorje. Momba ny andro firavoravoana manokana dia nilaza ny Our Lady:
Ireo mpisorona izay handre ny fibabohana dia hanana hafaliana lehibe amin'izany andro izany! (Aogositra, 1984)
Ny fiaikena dia tsy tokony ho fahazarana izay “hanamora ny fahotana.” Hoy i Vicka tamin'ny vondrona mpitety fivarotana rehetra: "Ny fiaikena dia zavatra tsy maintsy manao olombelona vaovao hivoaka eo aminao. Tsy tianay Lady ny hieritreritra fa hanafaka anao amin'ny ota ny fiaiken-keloka ary mamela anao hanohy ny fiainana aorian'izany. Tsia, antso ny fieken-keloka mba hiovana. Tsy maintsy lasa olona vaovao ianao! ” Nanazava ny hevitra mitovy amin'i Jelena ny Our Lady, izay nahazo valiny tamin'ny Our Lady tamin'ny andro voalohan'ny fisehoana:
Aza mandeha amin'ny fiaiken-keloka amin'ny alàlan'ny fahazarana, mitoera ao ihany. Tsia, tsy tsara. Ny fieken-keloka dia tokony hanelingelina ny finoanao. Tokony hampahery anao sy hitondra anao hanakaiky kokoa an'i Jesosy. Raha tsy midika na inona na inona ho anao ny fiaikena, marina, dia hiova ianao amin'ny fahasarotana be. (Novambra 7, 1983)
Avy amin'ny katesizy katolika:
Ny hery manontolo an'ny Sakramentan'ny Fivalozana dia mamerina antsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary mampifandray antsika aminy miaraka amin'ny fisakaizana akaiky… Eny, ny sakramentan'ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia miteraka "fitsanganana ara-panahy" marina, famerenana indray ny fahamendrehana sy ny fitahian'ny fiainana izay zanak'Andriamanitra, izay tena sarobidy indrindra dia ny fisakaizana amin'Andriamanitra. (Paragrafy 1468)
Ny Our Lady dia manoro hevitra ny alahady Mass, ary rehefa azo atao, Mass isan'andro, dia notaterin'ny vinavina fa nitomany ny Tompontsika rehefa niresaka momba ny Eokaristia sy ny Mass.
Tsy mankalaza ny Eokaristia araka ny tianao ianao. Raha hainao ny fahasoavana sy ny fanomezana azonao, dia manomana ny tenanao isan'andro isan'andro mandritra ny adiny iray. (1985)
Ny andro hariva tao Medjugorje no fotoana lehibe indrindra amin'ny andro satria manatrika ny Tompontsika ary omeny antsika amin'ny fomba manokana ny Zanany. Ny Mass dia manan-danja kokoa noho ny fisehon'ny Our Lady. Nilaza ilay vazaha Marija fa raha tsy maintsy misafidy eo amin'ny Eokaristia sy ny fisehon-tarehy izy dia izy no hisafidy ny Eokaristia. Hoy ny Our Lady:
Ny andro hariva dia tsy maintsy tazonina maharitra. (Oktobra 6, 1981)
Nangataka ihany koa izy fa ny vavaka amin'ny Fanahy Masina dia tokony holazaina alohan'ny Mass. Te-hahita ny Mass Mass ny Lady Lady ho "endrika faran'izay ambony indrindra" ary "ivon'ny fiainantsika" (hoy i Marija). Ilay vinavinan'i Vicka dia nilaza ihany koa fa ny reny malala dia mahita ny Lamesa ho "fotoana lehibe indrindra sy masina indrindra amin'ny fiainantsika. Mila miomana sy madio isika handray an'i Jesosy amim-panajana lehibe. Mitomany ny Lady us satria tsy manaja olona ny Eokaristia ny olona. Tian'ilay Renin'Andrimanitra hahatsapa ny hakanton'ny zava-miafina ny Lamesa.
Maro aminareo no mahatsapa ny hakanton'ny Lamesa Masina… Jesosy dia manome ny fahasoavany amin'ny Lamesa. ” (3 aprily 1986) “Avelao ny Mass Masina ho fiainanao. (April 25, 1988)
Midika izany fa ny sorona sy ny nitsanganan'i Kristy dia tsy maintsy ho lasa fiainantsika, miaraka amin'ny fanantenana ny Fiavany Fanindroany. Mandritra ny Lamesa dia mandray ny Kristy Velona ary ao Aminy isika dia mandray ny mistery famonjena rehetra izay tsy maintsy manova sy mamindra antsika. Ny Mass Mass dia fanehoana tonga lafatra ny misterin'ny Kristy izay ahafahantsika mandray anjara feno amin'ny fiainany. Hoy ny Our Lady:
Ny Mass dia ny vavaka lehibe indrindra an'Andriamanitra. Tsy ho hitanao mihitsy ny maha-lehibe azy. Izany no antony tsy maintsy ahatongavanao ho tonga lafatra sy manetry tena ao amin'ny Lamesa, ary tokony hiomana ny tenanao ianao. (1983)
Tianay ny vadinay ary ho feno hafaliana sy fanantenana isika mandritra ny Mass ary hanao ezaka mba ho "fotoana iray hiainan'Andriamanitra" izao fotoana izao. Ny fanomezana an'i Jesosy sy ny Fanahy Masina dia ampahany lehibe amin'ny hafatra satria io no lalana tokana mankany amin'ny fahamasinana. Ny fisokafana amin'ny Fanahy Masina ao amin'ny sakramenta no fomba hanamasinana antsika. Amin'izany fomba izany, ho azontsika ny Lady-ntsika, ny fahasoavana ho vavolombelony eto amin'izao tontolo izao hanatanteraka ny drafitr'Andriamanitra sy ny drafiny. Hoy ny Our Lady:
Sokafy ny Fanahy Masina. Indrindra mandritra ireo andro ireo dia miasa amin'ny alalanao ny Fanahy Masina. Sokafy ny fonao ary hatolony an'i Jesôsy ny fiainanao ka miasa amin'ny fonareo Izy. (May 23, 1985)
Posted in Fiarovana ara-panahy, Ireo mpamaky ny Mejugorje.
← Miankina amin'ny Romanina Ritual…
Ny fampiharana sy ny fampanantenan'ny… →